Daawo Sawirada Gaari Yar oo ku Dhacay Godweyne Dadna Dilay
Home Somali News East Africa Daawo Sawirada Gaari Yar oo ku Dhacay Godweyne Dadna Dilay
Agagaarka isgooska Dabk ee Magaalada Muqdisho ayaa maanta waxaa ka dhacay shil khasaare geestay kaasi oo yimid kadib markii gaari nooca Soomaalida u taqaan Kaaribta uu si xowli ah kaga yimid dhanka Bunadada Waaberi ee Magaalada Muqdisho.
Sida ay inoo sheegeen dadka ku sugnaa Gobta wadaha Gaadiidka oo xakameeyn waaye gaariga kadib markii uu waaye bareega ayaa taasi waxa ay sababtay inuu ku dhufto qof meesha taagnaa oo lagu sheegay inuu ahaa nin oday ah kadibna uu kusii dhaco godweyn o laamiga dhiniicasa ku yaal halkaasi oo u ka soco dhismaha Daar laga dhisayo dabaq.
Gaari uu markii uu ku dhacay godka ayaa halkasi wuxuu kusii dilay nin Injineer ah oo ku howlanaa dhisida Guriga Naqshadisa kaasi oo mesha isku ku quur baxay.
Wadaha gaariga ayaa la sheegay inuu soo gaaray dhaawac qatar ah isaga oo koomo kujirana loola cararay isbitaalka Madiina ee Magaalada Muqdisho halkaasi oo xaaladiisa caafimaad lagu dabiibayo.
Arintani ayaa waxa ay qeyb ka tahay xirfada wadayaasha oo aad u yara iyaga oo ku soconaya xawaare ee aad usareeye taasi oo aysan hadhoowna aqoon sida loo xirfadeeyo marka uu gaari laga waayo bareega.
Gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale oo ka hadlay...